Android ဖုန်း/Tablet ကို မြန်မာစာစနစ်နှင့် မြန်မာစာ Keyboard ထည့်သွင်းနည်း (Complete Guide) – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | Apple Section (iOS)
မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့တယ်လီကွန်း ကွန်ရက်လွှမ်းခြုံနိုင်ရေး ကမ္ဘာ့အကျွမ်းကျင်ဆုံးပညာရှင်များနှင့် ဆောင်ရွက်မည် Call Recorder v1.4.1 for android(full version) Phone Ringtone: မမေ့ဆေး (Oasix,Alatt,Y-Zet , Feat : Shwe Htoo) Android Tuner v0.9.7.4 for android(latest version) Xilisoft Video Converter Ultimate v7.7.2.20130619 For Pc 37MB Home
Published On: Thu, Nov 24th, 2011 Android ဇော်ဂျီ ကီးဘုတ် | By သက်နိုင်စိုး Android ဖုန်း/Tablet ကို မြန်မာစာစနစ်နှင့် မြန်မာစာ Keyboard ထည့်သွင်းနည်း (Complete Guide)
Emotion UI ပါဝင်သော Huawei ဖုန်းများတွင် Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့်ထည့်ခြင်း (၂)
Emotion UI ပါဝင်သော Huawei ဖုန်းများတွင် Root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာဖောင့်သွင်းဖို့အတွက် iOS Theme by Myanmar Mobile Users Group
Frozen Keyboard Pro v0.5.1 for Android
Zawgyi Installer4Rooted Android ( .exe file )
17 comments on “Android ဖုန်း/Tablet ကို မြန်မာစာစနစ်နှင့် မြန်မာစာ Keyboard ထည့်သွင်းနည်း (Complete Guide)”	kyaw min oo on November 3, 2012 at 10:03 am said:
permissions ဆိုတာ ကျနော့စက်မှာ မပါဘူးဆ၇ာ ကျန်တာအားလုံးအဆင်ပြေတယ်
ကီးဘုတ်လည်းပီးသွားပြီ စာ၇ိုက်တော့ လေးဒေါင့်လဲမပေါ်ဘူး ဘာမှမပေါ်ဘူးဘာဆက်လုတ်၇မလဲ စက်က တ၇ုတ်တက်ဘလက် နာမည်က m08 ပါ
build number v2.1.4.IML74k.eng.
Reply ↓	Su Myat on November 3, 2012 at 12:03 pm said:
samsaung GT-S5830….android version 4.0.4…ICS v.4…ဖုန်းမှာ..မြန်မာ keyboard သုံးလို့မရလို့ပါ…myanmar font တော့ရပါတယ်..မြန်မာkeyboard သုံးချင်လို့ပါ…
Reply ↓	myo min on November 24, 2012 at 3:39 pm said:
gionee pionner ရဲ့root လုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးကိုလဲသိချင်ပါတယ်။
Reply ↓	aungmyo on November 28, 2012 at 8:32 am said:
lenovo ideatab A2107A-H မှာ မြန်မာစာရိုက်လို့ရပြီး ၊ စာကျမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ် ၊ Root မလုပ်ရသေးလို့လား ၊ Root လုပ်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ် ရမလည်း
Reply ↓	yoroshii on December 4, 2012 at 12:01 pm said:
HTC Incredible s ကို Custom Rom 4.0.+ (Sabsa Prime)
တင်လိုက်တာ..Forzen Keyboard Install လုပ်ပြီးပေမယ့်
HTC မှာ input method မတွေ့ လို့ တိုင်ပတ်နေတာ..
အခု မြန်မာကီးဘုတ်နဲ့ ကျမှပဲ..အဆင်ပြေတော့တယ်ဗျာ…
Reply ↓	kotavoy on December 8, 2012 at 7:42 pm said:
I think, android version 4.0.4 is incompatible with Root Explorer (2.9.3). On my s2, I could install, but unable to open. The problem was solved after I installed higher version of Root Explorer (2.20).
Pls get it here,
Reply ↓	mobile_Addict on December 23, 2012 at 10:44 pm said:
you are probably right. It happens to Xperia Neo V as well.
Reply ↓	zawlat on January 10, 2013 at 4:46 am said:
ကျေးဇူးအ၇မ်းတင်ပါတယ်ဗျာ ရှာနေတာကြာနေပြီ ခုမှဘဲ အဆင်ပြေတော့ တယ်ဗျာ ကျေးဇူးပါဆရာ
Reply ↓	waiminnoo on January 22, 2013 at 4:02 am said:
Root Access ပြုလုပ်ချင်ပါတယ်(မြန်မာကီဘုတ် ရရှိပြီးဖြစ်)
တံဆိပ် Model : TWZ
Andriod version 2.3.7 ဖုန်းပါ
Baseband version : MAUI.11AMD.W11.37.SP.V16,2011/12/01
Kernal version : 2.6.35.7 2012.08.2011:04:27
Build nymber : ALPS.GB.FDD2.MfP.V3.9
Custom Build Version : 1345431882
လိုလိုမယ်မယ် ဖုန်းကိုဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ထည့်လိုက်တယ်…………
မြန်မာလိုအတုံးတွေကိုမဖတ်တတ်လို့ စာဖတ်တတ်အောင် Root လုပ်လို့ ရ/မရ
နည်းလေးများရှိရင် ဆော့ဝဲ နှင့် အေပီပီ များလဲမစကြပါ အသေးစိတ်ပြောပြကူညီပေးပါ……………….
Reply ↓	ထက်နေခ on January 24, 2013 at 7:20 am said:
အစ်ကိုတို့ဆိုဒ်လးရှိနေသေးတာ တော်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ..။အင်တစ်ခေါက်က၀င်လို့မရတော့လို့..ဟိုလူတွေကိ တော်တော်ဒေါသထွက်မိတယ်..အများအကျိုးအတွက်မလုပ်ဆောင်ချင်ပဲ နာမည်ပဲလိုချင်တဲ့သူတွေပါဗျာ…။ဒီဆိုဒ်လေးက လူအတော်များများကို အကျိုးပြုပါတယ်…။
Reply ↓	Online Tha Ye` on January 27, 2013 at 5:12 am said:
ဟာဝေး U8825D မှာ root explorer ကတရုတ် root explorer ဖြစ်နေလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိလို့ ကူညီပါ
Online Tha Ye`
Reply ↓	မင်းအောင်ခန့် on January 27, 2013 at 11:06 am said:
ကူညီပါခင်ဗျာ ၊ကျွန်တော့်ဖုန်းက GALAXY S3 I9300GRTTHL ပါ ၊မြန်မာစာတော့ရေးလို့ရပါပြီး ၊စာတော့ဖတ်မရသေးပါဘူးINTERNET နဲ့ facebook မှာအတုံးလေးတွေပဲပေါ်နေပါတယ်၊ကျေးဇူးပြုပြီးနည်းလမ်းလေးပေးပါခင်ဗျာ ။ကျေးဇူးအထူး
Reply ↓	kokolin on February 25, 2013 at 5:05 pm said:
ဟမ်းစက်က မြန်မာဖောင့် အားလုံးမရဘူး Facebook မှာလဲ ရတယ် မေးလ်လဲဖတ်ရတယ် တချို. Application
တွေမှာ မြန်မာစာဖတ်မရဘူး ကူညီပေးပါဦး ကျွန်တော် မေးထဲပို.ပေးပါနော် ကျေးဇူးအထူးတင်လျှက်
Reply ↓	myozawaung on April 11, 2013 at 7:32 am said:
my phone not have myanmar font,my phone is sony ericsson xperia neo L , please how to root and how to install the myanmar font.
Reply ↓	Juvenile on April 21, 2013 at 9:14 pm said:
Reply ↓	sian mine on April 26, 2013 at 8:42 am said:
HTG phone root လုပ်ပြီးသားကို အခုလိုလုပ်လိုက်တာ ဖုန်းက restart ကျသွားပြီး ဘာမှမပေါ်လာတော့ဘူး။ လုပ်ပါဦး
Reply ↓	logan hein on June 6, 2013 at 5:38 am said:
thanksalot bro. your tutorial is the best I’ve ever read. Be an android genius..
KaungMon on Snapchat v2.1.0 for Androidmyonyunt180 on HUAWEI OFFICIAL FIRMWARE များစုစည်းမှုko lay on Samsung Galaxy S5570 ကို Root လုပ်ပြီး မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း ( How to Root Samsung Galaxy S5570 And Install Myanmar font )မုန်းမှာလား on ကျွန်တော်နဲ့ Frozen Keyboard Prosoe moe kyaw on Huawei Ascend P1 U9200 ရဲ့ Stock Recovery ပြန်သွင်းမယ် Android Development